TALE JENERALIN’NY BIANCO : Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah
Omaly vao nandrenesam-peo indray ny teo anivon’ny birao mahaleo tena misahana ny ady amin’ny kolikoly (Bianco) mahakasika ilay raharahan’i Mbola Rajaonah. 17 janvier 2019
Nanambara ny tale jeneralin’ity rafitra manokana ity fa raha tsy misy ny fiovana dia ny herinandro vao mitsidika io no halefa eny anivon’ny Fitsarana ireo antontan-taratasy mirakitra ny raharahan’i Mbola Rajaonah.
Andrasan’ny maro fatratra izay mety ho fivoaran’ilay raharahana kolikoly mahavoasaringotra an’ity tanora mpandraharaha ity. Ity farany izay fantatra tamin’ny andraikitra maha mpanolotsaina manokan’ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina sady mpandraharaha ara-toekarena ihany koa. Nisy ny raharahana kolikoly nanenjehana azy ny volana desambra lasa teo. Somary nitarazoka ny fandraisan’ireo mpanara-baovao ny fanadihadiana nataon’ny teo anivon’ny bianco ary nisy fotoana aza noahiana fa very an-javony fotsiny ity raharaha ity. Araka ny fanazavana noentin’ny tale jeneralin’ny bianco, Jean Louis Andriamifidy, omaly dia noho ny fiatrehan’ireo mpiasan’ny Fitsarana ny fotoam-pialan-tsasatra (vacances judiciaires) no antony nampihisatra ny fivoaran’iny raharaha iny.
Nambarany fa eo am-pamaranana ny famotorana rehetra mahakasika ity raharaha ity izy ireo amin’izao fotoana izao. Efa hadiva hifarana izany ary ny fiandohan’ny herinandro io no ho tonga eny amin’ny fahefam-pitsarana amin’izay ireo dosie mirakitra ny fanadihadiana sy ny raharahan’i Mbola Rajaonah. « Ny volana desambra no tena nanaovan’ny bianco fanadihadiana ny raharaha Mbola Rajaonah. Efa tokony hofaranana ilay dosie nefa tratran’ilay fotoam-pialan-tsasatra teo anivon’ny Fitsarana, nisy ihany koa ny raharaha hafa tokony mbola nohadihadiana dia tsy tratra. Amin’izao, efa miverina miasa ny eo anivon’ny Fitsarana, efa tena eo am-pamaranana an’ilay dosie ny mpanao fanadihadiana dia mety amin’ity faran’ny herinandro ity na ny fiandohan’ny herinandro miditra io no alefa eny amin’ny Fitsarana ireo dosie ireo”. Izay raha fintinina ny fanazavana noentin’ny tale jeneralin’ny Bianco.
“Tsy misy fiandaniana ny fampiharana ny lalàna”
Aorian’ny fahatongavan’ireo antontan-taratasy rehetra mirakitra ny raharahan’i Mbola Rajaonah dia anjaran’ny Fitsarana misahana manokana ny ady amin’ny kolikoly indray no manohy ny fanadihadiana rehetra. Izy ireo no tompon’ny teny farany amin’izay mety ho tohin’ny famotorana. Nohamafisin’ny tale jeneralin’ny bianco fa malalaka amin’ny asa iandraiketany izy ireo fa tsy miankina amin’izay fizotry ny raharaham-pirenena akory, tsy misy fiandaniana, hoy izy, ny fampiharana ny lalàna.
“Ny birao mahaleo tena misahana ny ady amin’ny kolikoly dia miezaka manao ny fanadihadiana amina trangana kolikoly rehetra izay tonga eny aminy. Io tsy vidiana ary tsy anavahana olona, fa matetika afangarontsika ny fampiharana ny lalàna, ny raharaham-pitsarana sy ny politika dia lasa mihasarotra ny fomba fijery ilay raharaha. Na inona na inona zavatra misy eto amin’ny firenena na eo amin’ny politika izany na ny fifandimbiasan-toerana eo amin’ny fitondrana izay dosie efa nataonay dia tohizanay foana”, hoy hatrany ny fanazavana noentin’ny tale jeneralin’ny bianco. Andrasana araka izany izay mety ho fanapahan-kevitra farany horaisin’ny avy eo anivon’ny Fitsarana manoloana ity raharahana kolikoly nahavoasaringotra an’i Mbola Rajaonah ity.